Foko sy Fiaviana · Novambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Foko sy Fiaviana · Novambra, 2010
Tantara mikasika ny Foko sy Fiaviana tamin'ny Novambra, 2010
Fanambarana ny zon'ny teratany : Mitoka-monina i Etazonia ankehitriny fa nanasonia i Kanadà
Amerika Avaratra 28 Novambra 2010
Nanaiky ny Fanambaran'ny Firenena Mikambana mikasika ny zon'ireo tompon-tany i Kanada, ary mametraka an'i Etazonia ho firenena tokana manohitra ity fanambarana ity.
Meksika: Fankalazàna ny Andron'ny Maty
Amerika Latina 06 Novambra 2010
Fotoana iray miavaka sy mifono misitery ny Andron'ny Maty fankalàzan'ny Meksikana isan-taona. Nefa inona tokoa moa no zava-mitranga mandritra io andro io? Nahoana no tena manan-danja be amin'ny fianakaviana Meksikana io andro fitsaharana io?
Zeorzia: Fandinihana momba ny Fampianarana sy Fianarana
Azia Afovoany sy Kaokazy 03 Novambra 2010
Mampianatra sy Mianatra miaraka amin'i Georgie Georgia (TLG) dia tetik'asa iray novolavolain'ny Minisiteran'ny Fampianarana sy ny Siansa any Zeorzia (MES) hikendrena manokana ireo olona tompon'ny teny miisa 1000 mahay miteny anglisy ka te hampianatra any amin'ny sekoly any an-toerana mandritra ny taom-pianarana 2010-2011. Ny andiany voalohany amin'ireo mpampianatra ireo no...